Blog - Ny karazana mpanonta barcode ary ny fomba fisafidianana ilay mpanonta barcode mety
Ny karazana mpanonta barcode ary ny fomba fisafidianana ilay mpanonta fantsona mety
1. Ny fitsipika iasan'ny mpanonta barcode
Ny mpanonta barcode dia azo zaraina amin'ny fomba fanontana roa: ny fanontana mivantana mivantana ny hafanana sy ny fanontana hafanana.
(1) Fanontana maharitra mivantana
Izy io dia manondro ny hafanana vokarina rehefa hafanaina ny loha pirinty, afindra amin'ny taratasy mafana hamoahana azy, ka hanonta lahatsoratra sy sary.
Endri-javatra: milina maivana, fanontana mazava, fanjifana mora vidy, fitehirizana ny sora-tanana tsy dia tsara, mora miova loko amin'ny masoandro.
(2) Fanontana famindrana mafana
Ny hafanana dia ateraky ny ankehitriny ao amin'ny resistor an'ny loha pirinty ary nohafanaina hamindrana ny firakotra toner amin'ny kasety karbôna amin'ny taratasy na fitaovana hafa.
Endri-javatra: Noho ny safidin'ireo fitaovana karbonika, ny mari-tsoratra vita pirinty amin'ny fitaovana samihafa dia mahazaka fitsapana ny fotoana ary tsy ho simba mandritra ny fotoana maharitra. Azo tehirizina elaela ny lahatsoratra, tsy mora entina sy rovitra, tsy mora miova endrika sy manova loko sns, izay tena mety amin'ny mpampiasa.
2. Ny fanasokajiana ny bmpanonta arcode
(1) Fanontana barcode finday
Amin'ny fampiasana mpanonta finday dia afaka mamokatra labozia, rosia ary tatitra tsotra amin'ny mpanonta maivana sy maharitra ianao. Ny mpanonta finday dia mampihena ny fandaniam-potoana, manatsara ny marina ary azo ampiasaina na aiza na aiza.
(2) Fanontana barcode Desktop
Ireo mpanonta barcode Desktop amin'ny ankapobeny dia mpanonta tànana plastika. Azon'izy ireo atao pirinty ny marika malalaka toy ny 110mm na 118mm. Raha tsy mila manonta marika mihoatra ny 2.500 isan'andro ianao, dia mety amin'ny labozia ambany sy habaka voafetra.
(3) mpanonta barcode indostrialy
Raha mila mpanonta barcode ianao hiasa ao amin'ny trano fanatobiana entana maloto na atrikasa, mila mandinika mpanonta fantsona indostrialy ianao. Ny hafainganam-pandehan'ny fanontam-pirinty, ny vahaolana avo lenta, dia afaka miasa amin'ny toe-javatra henjana, ny fahaiza-mampifanaraka, ny fanontana pirinty noho ny milina ara-barotra mahazatra maharitra, androm-piainana lava, maharitra ny kalitao, ka arak'ireo tombony azon'ny mpanonta, raha lehibe ny haben'ny fanontana, dia tokony ho omena laharam-pahamehana ny.
Ahoana ny fisafidianana mpanonta barcode tianao:
1. Ny isan'ny fanontana
Raha mila manonta marika eo amin'ny 1000 eo ho eo isan'andro ianao, atoro anao hividy mpanonta barcode birao mahazatra, fahaizan'ny taratasy milina birao ary fahaiza-manao fehikibo karbonika kely, kely ny endrika vokatra, tena mety amin'ny birao.
2. Ny sakan'ny marika
Ny sakan'ny pirinty dia manondro ny sakan'ny sakan'ny ambony indrindra azon'ny mpanonta barcode hanonta. Ny sakany lehibe dia afaka manonta marika kely, fa ny sakany kely dia azo antoka fa tsy afaka manonta marika lehibe. Ireo mpanonta barcode mahazatra dia manana habaka fanontana 4 santimetatra, ary koa 5 santimetatra, 6 santimetatra ary 8 santimetatra ny sakany. Ny safidy ankapobeny an'ny mpanonta 4 mirefy dia ampy ampiasaina.
WINPAL amin'izao fotoana izao dia manana karazana mpanonta 4 mirefy 5: WP300E, WP300D, WPB200, WP-T3A, WP300A.
Ny hafainganam-pandehan'ny fanontana pirinty ankapobeny dia 2-6 santimetatra isan-tsegondra, ary ny mpanonta manana hafainganam-pandeha avo kokoa dia afaka manonta 8-12 santimetatra isan-tsegondra. Raha mila manonta marika marobe maromaro ianao ao anatin'ny fotoana fohy, dia mety kokoa ny mpanonta amin'ny hafainganam-pandeha. Ny mpanonta WINPAL dia afaka manonta amin'ny hafainganana manomboka amin'ny 2 santimetatra ka hatramin'ny 12 santimetatra.
4. Kalitaon'ny fanontana
Ny valin'ny fanontana ny milina kaody barcode dia mizara ho 203 DPI, 300 DPI ary 600 DPI. Ny mpanonta printy avo lenta dia midika hoe maranitra kokoa ireo labozia avoakanao, no tsara kokoa ny fampirantiana.
Ny mpanonta barcode WINPAL dia manohana ny fanapahan-kevitra 203 DPI na 300 DPI, izay mahafeno tanteraka ny zavatra ilainao.
5. baikon'ny fanontana
Ny mpanonta printy dia manana ny fiteniny manokana, ny ankamaroan'ny mpanonta barcode eny an-tsena dia tsy afaka mampiasa fiteny fanontana iray fotsiny, fa ny baikon'ny fanontam-pirinty ihany no azony ampiasaina.
Ny mpanonta barcode WINPAL dia manohana karazana baiko fanontana, toa ny TSPL, EPL, ZPL, DPL sns.
6. Fanontana pirinty
Ny interface an'ny mpanonta barcode amin'ny ankapobeny dia misy port PARALLEL, port SERIAL, port USB ary port LAN. Fa ny ankamaroan'ny mpanonta dia tsy manana afa-tsy iray amin'ireo interface ireo. Raha manonta amin'ny alàlan'ny interface voafaritra ianao, dia ampiasao mpanonta miaraka amin'io interface io.
Fanontana barcode WINPAL manohana ny interface Bluetooth sy WiFi koa, manamora ny fanontana.
Printer misy Wifi, Printer mpanovo, Fanontam-pirinty fandraisam-peo 80mm, Fanontam-pirinty Thermal, 80mm mpanonta fandraisana, Printer finday,